နီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် (ICJ) ရုံးချိန်းနဲ့ အခေါင်းတစ်ဖက် ကျင်းတစ်ဖက် ဖြစ်တော့မည့် စကစ ဘာလုပ်မှာလဲ – Youth Bar
နီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် (ICJ) ရုံးချိန်းနဲ့ အခေါင်းတစ်ဖက် ကျင်းတစ်ဖက် ဖြစ်တော့မည့် စကစ ဘာလုပ်မှာလဲ
နီးကပ္လာျပီျဖစ္တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ (ICJ) ရံုးခ်ိန္းနဲ႔ အေခါင္းတစ္ဖက္ က်င္းတစ္ဖက္ ျဖစ္ေတာ့မည္႔ စကစ ဘာလုပ္မွာလဲ…
႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ (ICJ) မွာ လာမယ့္ (23.6.2021) မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ လူကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္လဲရေတာ့မည္ဟု သိရသည္….
လက္ရွိ ျမန္မာျပည္သူေတြ တရားဝင္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ (NUG) အစိုးရကေတာ့…..(ICJ) ရဲ႕စီရင္မႈကို သြားေရာက္နာခံမွာ ျဖစ္ၿပီး…..မအလ,ကေတာ့ ကမာၻ႔အလယ္မွာ ေႁမြေျခာက္ကိုက္ခံရႏိုင္မည့္ အေျခအေနေတြ စတင္ ေတြ႕ႀကဳံရၿပီျဖစ္သည္…..
လက္ရွိမွာ မအလ,သည္ (ICJ) မွာ တရားစြဲထားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕အႀကီးအကဲျဖစ္သလို…… လက္ရွိလည္း ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ျပေနတဲ့…. စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ေနတာမို႔…..
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ လုပ္ၿပီး (ICJ) ကို သြားေရာက္ လိုက္တာနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရမည့္ အေရးက ဖိတ္ေခၚစရာေတာင္ မလိုေပ…. (ေလ့လာထားမႈအရ “ICJ” မွာ တရားစြပ္စြဲခံထားရသူအား ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္)
(NUG) ကလည္း မအလ,အား ဖမ္းဆီးေပးပါရန္ ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ (Interpol ) ဆီသို႔ စာပို႔ေတာင္းဆိုထားၿပီလည္း ျဖစ္တာမို႔ မအလ,အတြက္ အေခါင္းတစ္ဖက္ က်င္းတစ္ဖက္ ျဖစ္ေတာ့မည္…..
မအလ,အေနျဖင့္ (ICJ) ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပစ္မႈအတြက္ ေခၚယူမႈအား မသြားပဲ (NUG) သာ သြားေရာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္…… ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ ႏိူင္ငံတကာရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈအား (NUG) သာလွ်င္ ရရွိသြားေတာ့မည္…..
Crd- Original uploader.
နီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် (ICJ) ရုံးချိန်းနဲ့ အခေါင်းတစ်ဖက် ကျင်းတစ်ဖက် ဖြစ်တော့မည့် စကစ ဘာလုပ်မှာလဲ… 👇👇👇
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုအတွက် (ICJ) မှာ လာမယ့် (23.6.2021) မှာ ဒုတိယအကြိမ် လူကိုယ်တိုင် လျှောက်လဲရတော့မည်ဟု သိရသည်….
လက်ရှိ မြန်မာပြည်သူတွေ တရားဝင် တင်မြှောက်ထားတဲ့ (NUG) အစိုးရကတော့…..(ICJ) ရဲ့စီရင်မှုကို သွားရောက်နာခံမှာ ဖြစ်ပြီး…..မအလ,ကတော့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြွေခြောက်ကိုက်ခံရနိုင်မည့် အခြေအနေတွေ စတင် တွေ့ကြုံရပြီဖြစ်သည်…..
လက်ရှိမှာ မအလ,သည် (ICJ) မှာ တရားစွဲထားသော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သလို…… လက်ရှိလည်း ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ပြနေတဲ့…. စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်နေတာမို့…..
နိုင်ငံခေါင်းဆောင် လုပ်ပြီး (ICJ) ကို သွားရောက် လိုက်တာနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရမည့် အရေးက ဖိတ်ခေါ်စရာတောင် မလိုပေ…. (လေ့လာထားမှုအရ “ICJ” မှာ တရားစွပ်စွဲခံထားရသူအား ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့် ရှိသည်)
(NUG) ကလည်း မအလ,အား ဖမ်းဆီးပေးပါရန် နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ (Interpol ) ဆီသို့ စာပို့တောင်းဆိုထားပြီလည်း ဖြစ်တာမို့ မအလ,အတွက် အခေါင်းတစ်ဖက် ကျင်းတစ်ဖက် ဖြစ်တော့မည်…..
မအလ,အနေဖြင့် (ICJ) ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပြစ်မှုအတွက် ခေါ်ယူမှုအား မသွားပဲ (NUG) သာ သွားရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်…… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် နိူင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုအား (NUG) သာလျှင် ရရှိသွားတော့မည်…..
အမေစုရဲ့မွေးနေ့အကြိုအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သော ဂုဏ်ပြုကဗျာပြိုင်ပွဲမှပထမဆုရရှိခဲ့တဲ့ ကဗ်ာလေး
မြန်မာငွေ သုံးသိန်းအထက်လက်ဝယ်တွေ့ရှိလျှင်အရေး ယူတော့မည်ဟု MWD ကြေညာ
အလံဖြူရော အလံဝါပါထောင်ပြီး အကူအညီတောင်းခံနေရတဲ့...
ကျန်းမာရေး • နိုင်ငံရေး